Iwu Nzuzo na Iwu Kuki | RayHaber | raillynews
HomeOzi okporo ụzọIwu Nzuzo na Kuki
RayHaber Nnọọ na Weebụ,
Ndị na-esonụ "Nzuzo Nzuzo", RayHaberna-achịkwa inye ozi na ọrụ enyere ndị ọrụ anyị bara uru.
RayHaber Onye ọrụ ọ bụla na-abanye ma ọ bụ dejupụta fọm na saịtị ahụ agụọla ma nakwere usoro ndị dị na Nkwupụta nwebisiinka, Iwu Nzuzo yana Usoro eji. ± r.
RayHaberNwere ike iji ozi anakọtara site n'aka ndị ọrụ edebanyere aha na ndị ọbịa bịara na saịtị Weebụ maka nyocha ọ bụla. RayHaber kekọrịta ndị mmekọ azụmahịa. Agbanyeghị, agaghị eziga ozi e-mail na ozi nkeonwe ọ bụla maka ndị mmekọ, ụlọ ọrụ, nzukọ ma ọ bụ nzukọ ọ bụla na-enweghị nkwenye onye ọrụ ahụ.
RayHaber E-mail, aha, aha nna, akara ekwentị na ozi ọ bụla etinyere n’oge ndebanye aha agaghị ebipụta ya na Web Site nke ndị debara aha na ndị ọbịa;
RayHaber 3 ga-ekpughe ozi nkeonwe gị n'okpuru ọnọdụ iwu na usoro iwu. emeghee oriri.
b.) RayHaberiji chekwaa ma chebe ikike nke ihe onwunwe nke
RayHaberIhe omuma nke onwe gi nke echekwara Enweghị ụdị a, ereghị, gbazite ma ọ bụ gbanwere ya na ụlọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ nzukọ ọ bụla. Ewezuga dịka enyere na "nkwekọrịta nzuzo", 3. ekerịtala ndị mmadụ n'otu n'otu. RayHaber na - ebuli ihe niile kwere omume iji mezuo ọnọdụ ekwere na nkwekọrịta a.
RayHaber ozi echekwara na gburugburu ọhaneze. RayHaberna-eji usoro ụlọ ọrụ dị iche iche ichedo ihe gbasara gburugburu.
I nwere ikike imelite ma gbanwee ozi nkeonwe ọ bụla i tinyere n’oge ndebanye n’oge ọ bụla. RayHaber tozuru oke ihichapụ ma ọ bụ kwụsịtụ akaụntụ gị ma ọ bụrụ na ị sọpụrụ “Nzuzo Nzuzo” a na “nkwekọrịta Ọrụ”.
N'ihi ọdịdị nke ịntanetị, enwere ike ịkesa ozi ahụ na ịntanetị n'enweghị usoro nchebe zuru oke yana ndị na-enyeghị ikike nwere ike ịnata ma jiri ya. Mmebi nke ojiji a na ojiji RayHaberabụghị ọrụ nke.
N'ụfọdụ, enwere ike ịnakọta ozi na-abụghị nke aka. Ofdị ihe nchọgharị intanet ị na - eji dị ka ihe atụ nke ụdị ozi a, sistemụ arụmọrụ gị, njikọ nke saịtị anyị ma ọ bụ aha saịtị ahụ nwere ike inye aha ngalaba.
Enwere ike itinye ozi na kọmputa gị mgbe ị gara na saịtị ahụ. Ozi a ga-adi n'ụdị kuki yie ma ọ bụ faịlụ yiri ya, ọ ga - enyere anyị aka n'ọtụtụ ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-enye anyị ohere ịkwa cookies, saịtị, na mgbasa ozi maka ọdịmma gị na mmasị gị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nchọgharị Internetntanetị niile nwere nhọrọ maka ihichapụ kuki na draịvụ draịvụ gị, na-egbochi ka edee ya ede, ma ọ bụ nweta ozi ịdọ aka ná ntị tupu echekwa ha. Maka ozi ndị ọzọ, biko rụtụ aka na faịlụ enyemaka na ojiji ojiji nke ihe nchọgharị gị.
A na-eji Adreesị IP gị iji mee ka saịtị Weebụsaịtị na sava anyị na-arụ ọrụ, na-edozi ma na-edozi nsogbu. Ejiri adreesị IP gị mata gị.
A na-edebe ihe ndị bịara nleta, ozi ndị bịara nleta, ozi nleta (IP, timestamp, useragent) gụnyere ndị ọrụ Usoro Sistemu.RayHaber nwere ikike ịgbanwe ozi ọ bụla na ederede a. Site na iji saịtị a, ị na-ahụta na ịnabata mgbanwe niile na "Nzuzo Nzuzo" a.
Edemede nke ọdịnaya niile dịka koodu, akụkọ, eserese, ajụjụ ọnụ RayHaber.na. RayHaberEdemede, ihe, onyonyo, faịlụ ọdịyo, ihe nkiri, vidiyo, atụmatụ na nhazi na saịtị ahụ .com na-echebe site na iwu nwebisiinka 5846. ndị a RayHaber.com nwere ike ghara i coomi, kesaa, gbanwee, bipụtara ya n'ụzọ ọ bụla na-enweghị ikike edere nke .com. Ikpokọ na iji ya enweghị ike ịme ya na enweghị ikike yana enweghị ịkọwapụta isi mmalite ahụ.
RayHaberNjikọ njikọ dị na .com mepere na ibe iche. Ndi ode akwukwo bu ndi edere ya na ihe edeputara. RayHaber.com nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla na-enweghị amamọkwa. Anyị na-ahụ maka njehie ọ bụla ozi ndị dị na saịtị a.
All njikọ mpụga na saịtị ahụ na-emepe na ibe iche. RayHaber.com anaghị ebu ọrụ maka njikọ dị na mpụga.
RayHaber na-asọpụrụ nzuzo nke gị na ndị ọbịa gị ma kwe nkwa na ị ga-agbaso iwu edepụtara na nke a.
© Copyright 2020 RayHaber.com Ikike niile echekwabara.
Ankara Metro contract sign
Marmaray Project CR3 Nkwekọrịta: Gebze Halkalı Mmelite nke Usoro Ọhịa:
Marmaray Project-BC1 Nkwekọrịta a na-enwe ọnwa nke ọnwa gara aga site na saịtị owuwu…
Minister Turhan: Anyị mere okporo ụzọ ụgbọ ala n'ime Iwu Steti
Injinịa na ndụmọdụ Ọrụ Nkwekọrịta